Diki Bhizinesi Gwaro reSocial Media Mastery | Martech Zone
NeChishanu, Nyamavhuvhu 30, 2013 Douglas Karr
Ini handisati ndagutsikana kuti bhizinesi rega rega rakagadzirira kuisa mari pasocial media zano. Kune makambani akaita seApple ane mavara anoshamisa, kushambadzira kwakanaka, uye zvigadzirwa zvikuru zvinotyaira kushambadzira kuburikidza nenharaunda yavo yevashandisi. Apple haidi kuti ive inoshandira pasocial media kuti irarame uye ibudirire. Mamwe makambani ari kumucheto kwakatarisana kwechiyero, nebasa revatengi uye nyaya dzekugutsikana kwevatengi. Kudzivisa zvemagariro midhiya inogona kunge iri zano rakanaka kudzamara vagone kugadzirisa maitiro avo uye zvigadzirwa.
Asi, kune iyo kambani iyo inoda kutora mugove wemusika, kuvaka masimba, kuvaka pesvedzero uye kukura bhizinesi ravo, zvemagariro midhiya yakachipa-kudhura, yakanyanya kuyedza nzira dzekuita kudaro. ndinoti yakakwirira kuedza nekuti zvinoda nguva uye kuzvipira kubva kwauri uye nechikwata chako kuburitsa zvirimo uye nekupa kukosha kukura vateereri vako nekuvaka nharaunda. Izvi zvinonyanya kuitika kumabhizinesi madiki asina mari yekushandisa 'kutenga' kushambadza kunodiwa kuti ukure.
Zvemagariro midhiya zvave zvakakosha kune bhizinesi diki rekushambadzira chirongwa! Mubvunzo unoramba uripo ndewekuti: "bhizinesi rako rinogona sei kuwana zvakanyanya kubva kushambadziro yemagariro enhau?". Tsvaga mune Iyo Diki Bhizinesi Gwaro kuSocial Media Mastery, iyo nyowani infographic yakaunzwa kwauri na MarketMeSuite uye Nzvimbo!